January | 2017 | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
အရှင် ခေမာ စာရ added3new videos
This picture of U Ko Ni’s mother made me cry again
January 31, 2017 January 31, 2017 drkokogyi
Credit toaMuslim friend.
His writing and this picture of U Ko Ni’s mother made me cry again.
ဦးကိုနီ​သေတာဝမ်းသာ​ကြောင်းတင်​ထားတဲ့ Aries Man ဆိုတဲ့ ရဲအုပ်​ အကြမ်းဖက်​တိုက်​ဖျက်​​ရေး က၊သတင်းတပ်​ဖွဲ့ကလူဟာ ​ဒေါ်​အောင်​ဆန်းစုကြည်​ရဲ့ခြံထဲအထိ အနီးကပ်​​ရောက်​ခဲ့ဖူးတယ်​တဲ့
Kyaw Swar Moe feeling worried.
ဦးကိုနီသေတာဝမ်းသာကြောင်းတင်ထားတဲ့ Aries Man ဆိုတဲ့ ရဲအုပ် အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေး က၊သတင်းတပ်ဖွဲ့ကလူဟာ
အမေစု လုံခြုံရေးကို အများကြီးသတိထားဖို့လိုနေပါပြီ။ နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်တွေထဲကလို လုံခြုံရေးယူပေးတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေထဲက သစ္စာဖောက်ပြီး လုပ်ကြံခံရတာမျိုး ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့ မပြောနိုင်ဘူး။
ဒီလူကို သေသေချာချာ စစ်ဆေးမေးမြန်းတာမျိုးလုပ်သင့်နေပါပြီ
Tin Tun Win
ချစ်တဲ့သူငယ်ချင်းကြောင့်church လဲ ရောက်ဘူးတယ်
ဦးကိုနီ..နောက်ဆုံး ခရီး ..
.နိုင်ငံအတွက် ပေးဆပ်သွားသူအတွက် နိုင်ငံသား
တစ်ယောက်အနေနဲ့ သွားသင့် တယ်ထင်လို့
၂၁ရာစု ဦးရာဇတ် ဆိုတော့ ကျော်ဇင်သိန်းဆိုတဲ့ကောင်က လုပ်ကြံမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုကြိုသိနေတာလား😱အေးနေဝင်းတို့ best friendဆိုတော့မျက်စိကြီးနားကြီးအရာရာကိုကြိုသိတယ်ထင်ရဲ့ 
Po Pyae Thu
၂၁ရာစု ဦးရာဇတ် ဆိုတော့ ကျော်ဇင်သိန်းဆိုတဲ့ကောင်က လုပ်ကြံမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုကြိုသိနေတာလား 😱 😱 😱 😱အေးနေဝင်းတို့ best friendဆိုတော့မျက်စိကြီးနားကြီးအရာရာကိုကြိုသိတယ်ထင်ရဲ့ 
” ဦးကိုနီ က မနိမ့်ပါး မကျဉ်းမြောင်းဘူး၊ ခင်ဗျားတို့က နိမ့်ကျ ကျဉ်းမြောင်းနေတာ”
မွတ်စလင်အကျိုး၊ တိုင်းပြည်အကျိုး ခွဲပြောနေကြတာကိုက အဲဒီလူတွေဟာ ‘နိုင်ငံရေး’ ဆိုတာ ဘာမှန်း၊ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ ဘာမှန်း နားကို မလည်နိုင် ဉာဏ်ရည်မမီကြတဲ့ သဘောပါ။
လူ့အဖွဲ့အစည်းတရပ်ဟာ လူနည်းစုတွေ ဖိနှိပ်ခံနေရတယ် ဆိုရင်လဲ မမျှတတဲ့၊ လွတ်လပ်မှုအပြည့်အဝ မရတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတရပ် ဖြစ်သွားပြီ။ လူနည်းစုလွတ်မြောက်ရေး၊ တန်းတူရည်မျှရေး အားထုတ်တယ်ဆိုတာ လူ့အဖွဲ့အစည်းတရပ်လုံး မျှတအောင်၊ တန်းတူရည်မျှ လွတ်လပ်မှုပြည့်စုံတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်အောင် အားထုတ်ခြင်းပါပဲ။
ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေကို ကုလားရယ်၊ တရုတ်ရယ် လူမျိုးအပေါ် မှီခွဲလိုက်၊ ခရစ်ယာန်ရယ်၊ မွတ်စလင်ရယ် ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုအပေါ် မှီခွဲလိုက်လုပ်တာဟာ အပျက်သဘော၊ အနုတ်လက္ခဏာသာ ဖြစ်စေတဲ့ ကျဉ်းမြောင်းဝါဒ ခွဲခြမ်းရေးဝါဒပါ။
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှု ဆိုတာ မတူညီကွဲပြားမှုတွေ အပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာယှဉ်တွဲနေထိုင် ညီညွတ်အောင် နေထိုင်ဖို့ တည်ဆောက်ခြင်းပါ။